राेचक Archives - Page5of 8 - Saptakoshionline
किन दाहिने हातको बढी प्रयोग गर्छन्?
एजेन्सी । हातले केही समाउन सिक्ने बेला बच्चाहरूले दुवै हातको प्रयोग गर्छन्। तर बल बढ्दै जाँदा उनीहरूले दुइटै हातको प्रयोग गर्न थाल्छन्। कतिपय बच्चाले दाहिने हातको प्रयोग बढी गर्छन् भने कतिपयले देब्रे हातको। हामी बच्चालाई दाहिने हातको प्रयोग गर्न सिकाउँछौँ किनकि मान्छेहरूले त्यही हातको बढी प्रयोग गर्छन्। तर त्यसको बावजुद केही बच्चाहरू देब्रे हातकै प्रयोग गर्छन्। यदि तपाईँको बच्चाले पनि त्यस्तो ग...
नर्वेका ५८ वर्षका मन्त्री प्रोटोकल मिचेर २८ वर्षकी गलफ्रेन्डसँग इरान घुम्न गए, अनि विरोधपछि राजीनामा नर्वे – नर्वेका माछामन्त्री (फिसरिज मिनिस्टर) ५८ वर्षका पेर सेन्डवर्गले सुरक्षा प्रोटोकल मिचेको विवादका कारण राजीनामा दिनुपरेको छ । उनी २८ वर्षकी आफ्नी प्रेमिका बहारिह लेटनेसलाई लिएर जुलाईमा छुट्टी मनाउन इरान गएका थिए । पूर्वमिस इरानसमेत रहेकी उनकी प्रेमिका बहारिहलाई लिएर विदेश जाँदा उनले सुरक्...
महिलाहरू थुतुनी हुन्छन् अर्थात धेरै बोल्छन् । अनुसन्धानबाट पनि यो प्रमाणित भएको छ । एक अध्ययनका अनुसार एक जना महिला एक दिनमा २० हजार शब्द बोल्छन्, जबकी पुरुषका लागि यो तथ्यांक १३ हजार शब्द प्रतिदिनमा सीमित छ । महिला धेरै बोल्नुका वैज्ञानिक कारण पनि रहेको बताइएको छ । अमेरिकाका म्यारिल्यान्ड युनिभर्सिटीका विशेषज्ञका अनुसार महिलाको दिमागमा ‘फोक्सपटु’ नामक केमिकल धेरै मात्रामा हुन्छ । ‘फोक्सपटु’ एक...
एक हाटबजार जहाँ सामान हैन बिवाहको बजार लाग्छ
काठमाडौँ । खाद्यान्न तथा उपभोग्य वस्तु किनबेच गर्नका लागि हाटबजार लागेको हामि सबैलाई थाहा छ र यो स्वभाविकै हो । तर चीनमा भने बिहे गर्नका लागि हाटबजार लाग्ने गर्दछ । सांघाइको पिपुल्स स्क्वाएरस्थित पिपुल्स पार्कमा केही वर्षदेखि एउटा अनौठो बिहे हाटबजार लाग्दै आएको छ । त्यो बजारमा बिहेका सामान होइन, बिहेको नाता अर्थात् जोडी उपलब्ध हुन्छ । सन् २००५ देखि यो हाटबजार लाग्दै आएको छ । हरेक शन...
पुरुषका कारण हुने बाँझोपन कम गर्ने उपाय
बाँझोपनको समस्या पछिल्लो समय विश्वभर बढ्दै गएको छ । यसले गर्दा सन्तानको चाहमा रहेका धेरै दम्पती निराश हुँदै आएका छन् । बाँझोपनको कारण महिला वा पुरुष दुवै हुन सक्छन् । पुरुषका कारण हुने बाँझोपनको मुख्य कारण वीर्यमा शुक्राणुको मात्रा आवश्यक भन्दा कम हुनु हो । तर पछिल्लो अनुसन्धानले शुक्राणुको मात्रा बढाउने सजिलो माध्यम पत्ता लागेको अनुसन्धानकर्ताले बताएका छन् । अण्डरवेयर टाइट नभइ लुज (खुकुलो) ...
एक हजार जनामा एक जनाको हातमा मात्रै हुन्छ यस्तो रेखा, तपाईको छ ?
एजेन्सी। मानिसका हातमा कयौं प्रकारका रेखा र चिन्ह हुन्छन्। जसलाई हस्तरेखा ज्योतिषविद्याको माध्यमबाट हेरेर उसको भविष्यवाणी गरिन्छ। मानिसको हातमा शुभ र अशुभ दुवै चिन्ह हुन्छन्। तर त्यही चिन्हमध्ये एउटा चिन्ह यस्तो पनि हुन्छ जुन हजार व्यक्तिमध्ये एकजनाको हातमा मात्रै हुन्छ। यजसको हातमा यस्तो चिन्ह हुन्छ त्यसका व्यक्तिलाई भगवान शिवको सधैं कृपा भइरहन्छ। त्यो चिन्ह भनेको त्रिशुल हो। आज हामी तपाइँलाई हात...
एउटै फोटोमा दश लाख वटा रङ
माथिको फोटो हेर्नुस् । यसमा कति वटा रङ देखिन्छन् ? यो फोटोलाई पूर्ण आकारमा हेर्दा १० लाख पिक्सेल भेटिन्छन् । ति हरेक पिक्सेल एक अर्कामा अलिकति भएपनि भिन्न छन् । हरेक पिक्सेललाई हाम्रो कम्प्युटर वा मोबाईलमा राख्दा तिनमा मुख्यत तिन खाले रङ देखिन्छ- रातो, निलो र हरियो । देखाईएका ती तिन रङका तीव्रता (चम्काई) हरू समायोजन गरेर एक पिक्सेलको स्पष्ट रङहरू सेट गर्दछ आँखाले । ति साना साना खाले रङहरु यति स...
जिब्रोले निधार छुने अच्चमका युवा
मोरङ/ सामान्य मानिसलाई आफनो जिब्रोलाई नाकको टुप्पोसम्म पुर्याउनु नै धौ धौ पर्छ । तर मोरङमा एक अचम्मका युवा छन जो जिब्रोले निधारसम्म पुर्याएर सबैलाई चकित तुल्याउँछन । मोरङको उर्लाबारी ५ झुम्रामा बसोबास गर्दै आएका मोरङको बेलबारी ११ लक्ष्मीमार्गका यज्ञबहादुर कटुवालको अदभूत कलाले सबैलाई लोभ्याउने गरेको छ ।उनी आफनो जिब्रोलाई निधारसम्म पुर्याउन सक्छन । उनको नाकको डाँडी सामन्य मानिसको भन्दा भिन्न रहेको छ...